राशिफल Archives - NepalTrending
Nepal Trending — August 14, 2021 add comment
मेष–कृषि तथा पशुपालनमा पनि बढ्नेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् । सहयोगीहरूको साथ पाइनाले अप्ठ्यारा कामहरु पनि सजिलै पुरा हुनेछन । व्यापार–व्यवसायमा फाइदा होला । काम गरेर अरूलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ । वृष–बोलीको...	Read more »
Nepal Trending — July 20, 2021 add comment
मेष–मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेमको बन्धन कसिन सक्छ। भेटघाटले पूर्वार्ध रमाइलो हुनेछ। धन कमाउने अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ । रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोला। परिवारजनसँगको सम्पर्कले मनमा आनन्द मिल्नेछ। नयाँ काममा...	Read more »
Nepal Trending — July 12, 2021 add comment
मेष–विगतका निर्णयले काम बिग्रन सक्छ । मान्यजनको सुझावप्रति पनि विश्वास नलाग्ला । होश नपुग्नाले खर्च मात्र हुनेछ। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन् । बाध्यतापूर्ण काममै समय बित्न सक्छ । सहयोगको आशा देखाउनेहरूबाटै धोका...	Read more »
मेष–आकस्मिक निम्तोमा सहभागी हुने सम्भावना देखिन्छ । आहारविहारमा विशेष सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ ।विभिन्न उपहार पाइनुका साथै आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ । अतिथिका रूपमा सम्मान पाइने समय छ। प्राय सबै कामहरू बन्नेछन्,...	Read more »
मेष–पैत्रिक सम्पत्तिमा विवाद आउनुका साथै दाजुभाइमा भागबन्डाको समय छ, व्यवसाय र कृषितर्फ लगनशीलताले ठूलो काम बन्न सक्छ। सहकर्मीहरूसँग प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ। बिनाकारण आफन्तजनबाट टाढिनुपर्नेछ। मातापिताका बारेमा चिन्ता बढ्नेछ। विशवासपात्रले धोका दिनेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा...	Read more »
आज असार १७ गते विहिवार तपाईको राशिफल पढ्नुहोस !
Nepal Trending — July 1, 2021 add comment
मेष– भौतिक साधन जुट्नाले प्रसन्नता मिल्नेछ । साझेदारीमा पनि राम्रो फाइदा हुनेछ । अभिप्रेरणा जगाउनेहरू पनि प्रशस्तै भेटिनेछन् । रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट खानपानको आनन्द पाइएला । वृष– प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न...	Read more »
आज असार १६ गते बुधवार तपाईको राशिफल पढ्नुहोस !
Nepal Trending — June 30, 2021 add comment
मेष– अध्ययनमा समय दिन नसकिएला। लेनदेनको विवादले हानि पुर्याउन सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिन सक्छन्। स्वादिष्ट भोजनको अवसर प्राप्त भए पनि पेटको समस्याले सताउन सक्छ। अनावश्यक जमघटले काममा बाधा पुर्याउला। वृष– आफ्ना काम...	Read more »
आज असार १५ गते मंगलवारकाे राशिफल पढ्नुहाेस !
Nepal Trending — June 29, 2021 add comment
मेष– रमाइलो यात्रा हुने सम्भावना छ । मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । आम्दानी बढढ्नेछ परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन् । दिगोफाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ । वृष– आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन...	Read more »
आज असार १४ गते सोमवार तपाईंको राशिफल पढ्नुहाेस !
Nepal Trending — June 28, 2021 add comment
मेष– रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । संघर्ष गरेरै अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन्। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ । कृषिमा कामको चाप र चौपायामा केही समस्या देखिए पनि प्रशस्त...	Read more »
आज असार १३ गते आईतवार तपाईंको राशिफल पढ्नुहाेस !
Nepal Trending — June 27, 2021 add comment
मेष– सहयोगको आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन, सचेत रहनुहोस्। व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ। उद्योग र व्यापारमा फाइदा हुनेछ। प्रतिस्पर्धीलाई पनिपछि पार्न सकिनेछ। कृषिमा कामको चाप र चौपायामा केही समस्या देखिएला । वृष–...	Read more »